Dhaqamada iyo diimaha ka jira Finland - InfoFinland
Warar ku saabsan Finland > Warar aasaasi ah oo ku saabsan Finland > Dhaqamada iyo diimaha ka jira Finland
Finland waxaa deggan qiyaastii 5,5 malyan oo qofood, Luqadaha qarameed waa Finnish iyo Iswiidhan, Finland waxaa ka jirta xorriyad diimeed, taas oo ka dhigan in dadka oo dhan ay dooran karaan doontooda islamarkaasna ku cibaadaysan karaan. Boggan waxaad ka heleysaa macluumaad ku saabsan dadweynaha Finland, diimaha, xorriyadda diinta iyo diinta cunugga.
Tirada dadka Finland waa qiyaas ahaan 5,5 malyan oo qofood. Finland waa dal bannaan. Dadku waxey si gaar ah ugu soo aruureen magaalooyinka waa weyn iyo deegaamada. Soonaha caasimadda waxaa deggan dad ka badan malyan.
Dadka FinlandFinnish | Iswidish | Ingiriis
Finnishka iyo Iswidhishku waa luqadaha qaranka. Finnishka waxaa sidii afkooda hooyo ugu hadla wax in yar ka yar 4,9 malyan oo qofood, Iswidhishkana wax yara ka yar 300,000 oo qofood. Marka laga reebo Finnishka iyo Iswidhiska waxaa ugu badan ee lagu hadlaa Ruushka, Istooniya, Ingiriis, Soomaali iyo Carabi.
Dadka Finland waxaa ku jira bulshooyin kala duwan oo ah dadka laga tirada badan yahay, kuwaas oo leh luqad, dhaqan ama diin ka duwan kan Finnishka intiisa badan haystaan. Dadka laga tirada badan yahay ee soo jireenka ah waa tusaale ahaan Finnish-Iswiidhishka, Saamiyiinta, Roomaaniyiinta, Yuhuudda iyo Tataariyiinta. Waxaa kale oo Finland deggan dad halkan u soo guuray oo ka yimid Ruushka, Istooniya, wadamada Balkaanka, Soomaaliya iyo Ciraaq.
Maahanmuuttajat väestössäFinnish | Ingiriis
Inta badan dadka Finnishka ah waa Kirishtaan. Madhabta ugu weyn waa Kaniisadda Efangelis-luteeriga oo ay ka mid yihiin qiyaas ahaan 70% bulshadu. Kaniisadda Ortodoksiga ee Finland waa madhab diimeedka labaad ee ugu weyn. Wax yara kayar 1% bulshada ayaa ka tirsan kaniisadda Ortodoksiga. Kaniisadda Efangelis-luteeriga iyo kaniisadda Ortodoksiga waxey Finland ku leeyihiin derajo gaar ah. Tusaale ahaan waxey xaq u leeyihiin in ay canshuur qaataan.
Tobaneeye kun oo Muslimiin ah ayaa deggan Finland. Si kastoo ay ahaatase qeyb iyaga ka mid ah oo kaliya ayaa ka tirsan jimciyadaha Islaamiga ah. Waxaa sidoo kale Finland deggan dhowr kun oo Yuhuud ah. Helsinki iyo Turku waxaa ka shaqeeya macbudka Sinagoogiga.
Jimciyad-diimeedyada kale ee Finland ka jira waa tusaale ahaan Kaniisadda Katooliga ee Finland. Kaniisadda Helluntai, Kaniisadda Xorta ah, Kaniisadda Adventi, Kaniisadda Mormoriga iyo tan kuwa raacsan Jehova.
Qiyaasti saddex qaybtood hal qayb oo ka mid ah dadka Finland deggan kama tirsana wax jimciyad diimeed ah.
Xididda xaflado ciideedyo badan ee Finland ka jira waxay ka soo jeedaan diinta Kirishtaanka. Bogga InfoFinland Xafladaha ciidda ee Finnishka, waxaad ka heleysaa macluumaad ku saabsan, xilliyada Finland laga qaato xafladaha ciidda.
Jimciyado diimeedyadaFinnish | Iswidish | Ingiriis
Xornimada diinta iyo ku cibaadeysashada diintaada gudaha Finland
Finland waxaa ka jira xorriyadda diimeed. Dhammaan dadka ku nool Finland waxey xaq u leeyihiin in ay diinta ay rabaan doortaan islamarkaasna ku cibaadeystaan. Haddii aadan la dooneyn, ma ahan qasab in wax diin ah la doorto. Cidna qasab kuma ahan in uu ka qeybqaato cibaadeysi diimeed.
Ugu yaraan 20 qofood oo qaangaar ah waxey sameysan karaan urur diimeed. Qasab kuma ahan koox diimeedka in ay isu diiwaangeliyaan urur diimeed ee kooxdu waxey shaqeyn kartaa xittaa diiwaangelis la’aan.
Diiwaangelinta jimciyad diimeedFinnish | Iswidish | Ingiriis
Waalidka ayaa go’aaminaya diinta cunugga qaadanayo. Haddii ay waalidku ku aragti duwan yihiin arrinta, wax diin ah cunugga laguma darayo. Haddii ay maxkamadu labada waalid midkood u xukuntay in uu kaligiis mas’uul ka ahaado cunugga, isaga ayaa kaligiis go’aan ka gaaraya diinta cunugga.
Cunuggu xaq ayuu u leeyahay in uu dugsiga ku barto afkiisa hooyo. Faahfaahin dheeraad ah ka sii aqri bogga InfoFinlandi Waxbarashada aasaasiga ah.
Qofka qaangaarka ah, yacni qofka buuxiyay 18 sano wuxuu iskiis u go’aansan karaa diintiisa.